Samiichi Lafa Oromoo har’aas naannoo SULULTAATTI hin dhaabane – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosSamiichi Lafa Oromoo har’aas naannoo SULULTAATTI hin dhaabane
” Samiichi Lafa Oromoo har’aas naannoo SULULTAATTI hin dhaabane !!
Lafti argitan kun Magaalaa Sulultaa ganda Qasoo Osaaribbii ( Athilet Village) jedhamu keessatti argamudha.Lafi Kun duraanis kan Oromoota Horsiisee bultoota Abbotii Qabeenyaa naannawaa Sulultaati ture.Humnaan irraa fudhatame.
Abbaan Qabeenya inni Haaraa ammoo nama Saba TIGIIRAAYI ta’ee maqaa “Holland Reallstate”jedhaamu Hekiitaara 20 yookaan karee 200,000 dhuma Caamsaa kana irratti kennameefidha.
Garuu Mootummaan Naannoo Oroomiyaa Lafa maqaa Really statetiin kennuu dhiiseera jedhee Waggaa lama Oli ta’eera jedhee odeessaa jira.Garuu Kun kijiba ta’uu mul’isa.Yoo akkas ta’e
inni kunoo maaldha ree isa jedhu deebiisaa kijiba.Lafa keenya Qubattoota Tigirayiin saamsisuun dhaabbachuu qaba.Lafti kunis hatattamaan dhalattoota Oromoo naannichaaf deebi’uu qaba.Lafti keenya lafee keenya.
Via Shamshadin Taha
“Godinaa Walloo Anaa jillee Dhumugaa
Magaala sanbateetti kaleessa gabaatu ture.motummaan wayyaane Qeerroo Oromoo naannichaa baadiyaa irra gara magaala dhufan sodaa irraa qabuun Ulee fi cubee hidhatan irraa saamaa oolan.Warra ofirraa mormates rebbichaa fi saakata’insa cimaa irratti taasisaa oolan. Qeerroon Oromoo Wallootis dinnee didaa jechuun fundurra dinaa dhabachuun keenyaa shakki takkaa malee itti fufa jechaa jiran.Magaalaan Sambatee diddaa ykn mormii gabaa lagannaa gaggeessuun torban darbe keessa sirnichaaf jibbinsa qaban agarsiisaniiru.
Godinni Walloo hatattamaan bulchiinsa dararaa Naannoo Amaaraa jalaa baate gar Oromiyaatti akka deebiitu gaafatuun qeerroon Walloo waggoota dheeraadhaaf falmii gaggeessaa turan.Ammas gaaffiin Oromoota Walloo Kanuma.Qabsoon Itti fufa!!”